Lesi yisikhathi sokuthi intsha ifundiswe amakhono okuzisebenza, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Kwenye yezingosi ngabalula ukuthi ziningi izinto esizenza ngokuxhamazela sengathi asihlelekile siyisizwe. Isikhathi esiningi sivama ukuba ngomvakwezinye futhi siphendukezele izinto uma senza. Uma uzonakisisa indlela esenza ngayo ukuzama ukushintsha izinto eNingizimu Afrika kwezemfundo noma ezintweni eziphathelene nezamabhizinisi, siye sithathe isibonelo kwamanye amazwe bese kuthi ngenxa yesasasa esiba nalo ekwenzeni izinto singabe sisaxilonga ukuthi wona lawo mazwe enze kanjani ukufinyelela lapho esekhona.
Manje sekunomjaho wokuthi zonke izikole kufanele zenze i-coding and robotics. Umbuzo wami uthi ingabe zonke lezi zingane ezigcwele izikole zifuna ukuba ososayensi bobuxhakaxhaka bobuchwepheshe na? Yini eyenza ukuthi sicabange ukuthi zonke izingane zifuna ukungena emkhakheni wamakhompyutha?
Le nto ifana nokuthi sithi zonke izingane manje kufanele zenze izifundo zesayensi ukuze zibe odokotela noma zenze izifundo ze-accounting ukuze zonke izingane zibe abacwaningimabhuku. Cha, kona kuhle impela ukuthi siyisizwe sihambisane ne-digital technology kodwa akusho ukuthi yonke ingane ifuna ukwenza izifundo ezihambisana nobuchwepheshe. Kufanele siyibhekisise le nto ngoba ingenza ezinye izingane zigcine sezisizonda isikole ngoba zixinwa ngokuthi kufanele zenze i-coding and robotics.
Uma siza ekufakweni kwezifundo ezihambisana namabhizinisi nakhona ngake ngezwa ukuthi kukhona isinqumo esathathwa wumNyango wezeMfundo ukuthi uzohambisa othisha enyuvesi i-Unisa ukuthi bayokwenza izifundo ezimfishane zezamabhizinisi (i-entrepreneurship) bese labo thisha kuba yibona abafundisa izingane ngamabhizinisi. Leli iphutha elikhulu kakhulu.
Iphutha eligcina lidukisa isizwe wukuthi sizitshele ukuthi silungiselelela ukuthi izingane zibe wosomabhizinisi bezinga eliphezulu ngelinye ilanga kanti sibulala isizwe ngemfundisoze.
Uma kuziwa kwezamabhizinisi lona wumkhakha ongayi ngokuthi ufunde waze wagogoda noma ufundisa kahle kangakanani. Lona wumkhakha ohamba kakhulu ngokuthi into uyenze kunokuhlawumbisela. Awusebenzi nge-theory, loku okubhalwe ezincwadini. Yinto efana nokuthi umuntu akhulume aze ageqe amagula ngokuhamba amazwe aphesheya kodwa ebe engena-passport futhi engakaze ngisho aye khona la kwamakhelwane eSwatini noma eLesotho.
Cha, ungakhuluma uze ukhihlize amagwebu impela uma kuziwa ngokufunde phansi kodwa ujikelele wukuthi uma ufundisa wenze izibonelo ngamazwe wena osuke wawahamba. Loko kwenza nofisa ukuvakasha phesheya abe magange ngoba usuke ezwa yonke into kumuntu oseke waluhamba uhambo.
Ngakho-ke elami lithi indlela engcono yokuthi uhulumeni afake izifundo zamabhizinisi wukusebenzisana nosomabhizinisi asebevuthiwe ekuqaleni nasekumiseni amabhizinisi. Loku kuzokwenza ukuthi uma izingane zifunda zazi ukuthi zincela kogwansile. Kuhle ukusebenza nge-theory kodwa sonke siyazi ukuthi kulo mhlaba kusebenza izenzo, ngakho-ke ukuba sebhizinisini kufuna izenzo, hhayi ulwazi oluphelela ekhanda.
Kufanele sithi uma sifundisa izingane zethu ngezamabhizinisi siphinde sizifake khona emabhizinisi ukuzilolonga. Yingakho uthola ukuthi lezi ezinye izinhlanga zenza isiqiniseko sokuthi uma zenza izinto ezimayelana namabhizinsi azo, izingane zazo zizibeka eduze ukuze zifunde ngezikubonayo.
Omunye angathi “hhawu uBiyela wadlala ngathi nje , ngoba uyazi nje ukuthi thina bantu abansundu asinawo amabhizinisi, sizowathathaphi?”. Cha loku akudingi ukuthi size sibe namabhizinisi kodwa okubalulekile kufanele sizame umqondo wokuqala nokuqhuba ibhizinisi ezinganeni zethu.
Loku kusho ukuthi singazithengela noma iphakethe likaswidi, amakinati, amakhekhe noma sizifundise ukubhaka bese sizifundisa ukuthi loko kudayiswa kanjani.
Lesi yisifundo izingane zethu ezingasoze zasikhohlwa.